Majaajilayste loo haysto in uu yiri "Afrika ayaa ku gulaystay Koobka aduunka ". - BBC News Somali
Majaajilayste loo haysto in uu yiri "Afrika ayaa ku gulaystay Koobka aduunka ".
Image caption Kooxdii Faransiiska ee Kobka qaaday oo dabaaldagaya
Noah ayaa sheegay in uu warqad ka helay Mr Araud ka dib markii si kaftan ah uu ugu sheegay bandhigiisa maalinlaha ah "Afrika ayaa ku gulaystay Koobka aduunka ".
Mr Araud ayaa waxa uu warqadiisa ku yiri "ma jirto cid runta ka talaabsan karta "aqlabiyada ciyaartooyda waxa ay ku dhasheen oo ay wax ku barteen Fransiiska, wayn ku faraxsan yihiin in ay faransiis yihiin".
Safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Faransiiska, Gerard Araud ayaa sidoo kale sheegay in ciyaartooyda oo ka soo kal jeeda meelo kala gadisan ay tahay mid muujinaysa kala duwanaashiya dadka Fraansiiska.
"In aad ugu yeerto kooxdii Afrika , waxa ay u muuqataa in aad u diidan tahay in ay faransiis yihiin , ayuu Noah ka soo xigtay danjiraha Mareykanka u fadhiya Faransiiska.
Majaajilistahani lagu magacaabo Trevor Noah oo ka jawaabaya warqadda uga timid safiirka ayaa sheegay "dhammaan caalamka waxa ay u dabaaldagayeen Afrikaanimada kooxda Faransiiska , balse taasi dhanka xun lagama eegayn ee dhanka wanaagsan ayaa la eegayay ".
Nin ra'iisulwasaare iska dhigay oo 18 daqiiqo la sheekaystay wasiir arrimo dibadeed
Waxa uu sidoo kale Mr Noah ka soo horjeedsaday fikirka ah in qofka uusan wada ahaan Karin Faransiis iyo Afrika labaduba.
"Maxay tahay sababta in qofka uu haysto labo dhasho ay ugu kooban tahay oo kali ah koox gaar ah?" ayuu is waydiiyay.
Majaajilaystaha lagu magacaabo Trevor Noah oo asal ahaan ka soo jeedo dalka Koonfur Afrika ayaa intaa ku daray in qofka uu Faransiis noqdo aysan micnaheeda ahayn in Afrikaanimada ay kaa masaxmayso.